Flirtymania.plus मा अनलाइन कामुक कथाहरू - पढ्नुहोस् र एक लेखक बन्नुहोस्।
कामुक spanking कथाहरू - Flirtymania.plus मा उत्तम कामुक लघु कथा
सर्वश्रेष्ठ कामुक कथाहरू
के तपाईंलाई कामुक कथा कथन हराएको कला हो जस्तो लाग्छ? Flirtymania.plus अन्यथा तपाईं विश्वस्त हुनेछ। जब तपाईं राम्रोसँग लेखिएको कथा पढ्नुहुन्छ, तपाईंको छाला झिम्काउन थाल्छ र तपाईंको पेटमा यो अद्भुत न्यानो अनुभूति हुन्छ जुन बिस्तारै तल यसको कार्य गर्न थाल्छ। यो तिमीलाई कहिले भएको छैन? खैर, यो समय भयो।
कामुक मालिश कथाहरू
दिमाग उडाउने सेक्स अक्सर राम्रो कामुक मालिशको साथ शुरू हुन्छ। त्यो केहि अधिक को लागि मूड मा कसैलाई प्राप्त गर्दछ। प्रत्येक ठूलो मसाज संवेदनशील क्षेत्रमा कोमल स्ट्रोकको साथ शुरू हुन्छ ... कल्पना गर्नुहोस् ... र कल्पना गर्नुहोस् थप कल्पना गर्न हाम्रो कामुक मालिश कथाहरू जाँच गर्नुहोस्।
कामुक कब्जा कथा
अधिक र अधिक व्यक्तिहरू स्वामित्व, ईरोटिक सब्मिशन, र बीडीएसएममा रुचि राख्दै छन्। कामुक सम्पत्ति को बारे मा एक कुशलतापूर्वक क्राफ्ट गरिएको कथा पढ्नु भनेको टुtering्ग्याउने ओर्गास्मसँग पूर्ण उत्कृष्ट अनुभवको लागि प्रवेशद्वार हो।
कामुक किशोर कथाहरू
किशोर कामुक कथाहरू आनन्द लिन तपाईं किशोर हुनुपर्दैन। मीठो निर्दोषता धेरै वयस्कहरुलाई प्रेरणा दिन्छ। एक किशोर कामुक कथाले तपाईको कल्पनालाई उडाउन सक्छ, व्यावहारिक रूपमा एक किशोर किशोरी वा केटा संग वास्तविक अनुभव प्रतिस्थापन।
कामुक वर्जित कथाहरू
समयको साथ, यसले हाम्रो यौन भोक जगाउन अधिक र अधिक लिन्छ। के कुराले हामीलाई सानो बनायो जब हामी जवान थियौं - र यसले अक्सर मानक हेटेरो सेक्स समावेश गर्दछ - अब गर्दैन। यो परिवर्तन बिल्कुल सामान्य छ।
केही मानिसहरूलाई कामुक निषेधमा चासो विकास गर्न लाज लाग्छ, तर त्यहाँ हुनु आवश्यक छैन। Flirtymania.plus सबै स्वाद र प्राथमिकताहरूको लागि कथाहरू छन्, धेरै परम्परागतदेखि अत्यधिक अपरंपरागतसम्म।
कामुक बेवफाई कथाहरू
धेरै व्यक्तिहरू जागृत हुन्छन् जब उनीहरूले आफ्नो पार्टनर वा पति या पत्नीलाई धोका दिईरहेको कल्पना गर्छन्। यदि यसले तपाईंलाई उत्तेजित गर्छ भने, हामीसँग कामुक बेवफाई कथाहरूको प्रतीक्षा गर्दै एक धनी संग्रह छ!
समलि .्गी र समलैंगिक कामुक कथाहरू
हाम्रो कामुक समलि .्गी र समलि .्गी कथाहरूको योगदानकर्ताहरूले यौन तरलताको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा बुझ्दछन्। समलै .्गिकताले जगाएको मतलब तपाई समलिay्गी वा समलि .्गी हुनुहुन्छ भन्ने होइन।
कामुक अनैतिक कथाहरू
यो नै कामुक अनाचार कथाहरूको लागि जान्छ। यो एक रमाईलो र अधिक अनुभवी व्यक्ति कलिलो स्कूल lovemaking को कला मा एक स्कूल शिक्षा कल्पना गर्न को लागी आकर्षक छ।
कामुक सम्मोहन कथाहरू
जब कोही सम्मोहित गरिएको हुन्छ, तिनीहरू केहि पनि हुने कुराको लागि तिनीहरू जिम्मेवार हुँदैनन्। तिनीहरू आरक्षण बिना मजा लिन स्वतन्त्र छन्। हाम्रो कामुक सम्मोहन कथाहरूका पात्रहरूले ठीक त्यस्तै गर्दछन्।
तपाईंको आफ्नै कामुक कथा लेख्नुहोस्
हुनसक्छ तपाईं ईरोटिक रेकर्डि reading पढ्ने वा सुन्नेसँग सामग्री हुनुहुन्न; तपाईंसँग प्रतिभा लेख्ने छ र यसलाई प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ? हामी flirtymania.plus मा तपाईं एक कुशल कामुक कथाकार बन्ने मौका दिनेछ। उनीहरू भन्छन यदि तपाईंलाई तपाईको काम मन पर्छ भने तपाईले आफ्नो जीवनमा अर्को दिन पनि काम गर्नु पर्दैन। आज साइन अप गर्नुहोस् र हाम्रो अनुप्रयोगमा एउटा खाता खोल्नुहोस्!
प्रति पाठकलाई भुक्तान गर्नुहोस्
तपाइँ प्रत्येक पाठकको लागी भुक्तान हुनुहुनेछ जसले तपाइँको अनौंठो कथा पढेर रमाईलो पायो।
अडियोमा कामुक कथाहरू
तपाईंको कथाले अझ बढी प्रभाव पार्दछ भनेर निश्चित गर्न, हामी तिनीहरूलाई अडियोमा राख्न सक्छौं।
प्रीमियम सामग्री को प्लेसमेन्ट
यदि तपाईं बिल्कुल प्रीमियम सामग्री प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी त्यसलाई राख्नेछौं (र यसको लागि भुक्तानी गर्नुहोस्)।
Flirtymania.Plus मा जानुहोस् र आफ्नो सपना वास्तविकता मा बदल्नुहोस्
वयस्क क्याम च्याट विकल्पहरूSnapChat सेक्सी नामहरूकामुक कथाहरूसम्बद्ध कार्यक्रमएक वेबक्याम प्रसारक बन्नुहोस्अनलाइन बेच्नुहोस्मोडेलिंग एजेन्सीहरूका लागिएस्कॉर्ट व्यापारलेखहरूमा पैसा कमाउनुहोस्सामग्रीमा पैसा कमाउनुहोस्